अस्पतालबाटै किन भाग्छन् कोरोना आशंकित बिरामी ?
शिलापत्र संवाददाता काठमाडौं, ६ चैत
नागपुरको मायो अस्पतालबाट १४ मार्चमा कोरोना भाइरसका चार संदिग्ध बिरामी भागे । प्रहरी तत्काल उनीहरूको खोजीमा लाग्यो र उनीहरूलाई फिर्ता लिएर आयो । त्यपछि उनीहरूको परीक्षण गरियो तर उनीहरू चारैजनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएन ।
११ मार्चमा चार शंकास्पद बिरामी नागरपुरको मायो अस्पतालबाट भागेका भएका हुन् । तुरुन्त प्रहरी उनीहरूको खोजीमा लाग्यो र उनीहरूलाई आफ्नो घरबाट भेटाएर पुनः अस्पतालमा ल्यायो ।
अर्को एउटा यस्तै घटनामा इन्डोनेशियामा पनि भएको थियो । राजधानी जकार्तामा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएको बिरामी अस्पतालबाट भागे र अहिले पनि यस विषयमा यहाँको प्रहरीले छानबिन गरिरहेको छ । नेपालमा पनि यस्तै घटना घटेको थियो । टेकुस्थित अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका एक व्यक्ति त्यहाँबाट भागेर विराटनगर पुगेको घटना बाहिरिएको थियो ।
भागका सबैमा कोरोनाको संक्रमण नदेखिए तापनि यस घटनाले नयाँ प्रश्‍न उब्जाएको छ । उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी किन भाग्छन् ? अस्पतालमा जान र औषधि सेवन गर्न केको डर ? बिबिसीले मनोविद्सँग कुरा गरेर यी प्रश्नेको जवाफ खोजको छ ।
मनोविद्हरूका अनुसार डर र अन्यौलताका कारण उपचारका लागि पुगेका शंकास्पद बिरामी अस्पतालबाटै भाग्ने गर्छन् । अर्को कारण भनेको कोरोना भाइरसका बारेमा पर्याप्त जानकारीको अभावलाई औँल्याएका छन् ।
मनोविद् अक्षता भट्टको भनाइमा कोरोना भाइरसका बारेका नयाँ-नयाँ तथ्य पत्ता लागेसँग उनीहरूमा डर उत्पन्न हुँदैछ । संक्रमणको ठूलो संख्या पनि यसको कारण रहेको उनी मान्छिन् । यद्यपि, अक्षता भट्ट बिरामीहरू अस्पतालबाट भाग्नुको तीनवटा कारण औँल्याउँछिन् –
- मानिसहरूलाई आफ्नो पहिचान गोप्य नरहने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीमाथि आक्रमणको डर हुन्छ ।
- यदि कोरोना भाइरसको परीक्षण पोजेटिभ आयो भने ? यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म परिवारबाट टाढा बस्नु पर्ने हो कि भन्नेह चिन्ता शंकास्पद बिरामी देखिन्छ ।
- यस संक्रमणको कुनै उपचार नै छैन भने हामीलाई किन एसोलेसनमा राखिँदै छ भन्न शंका पनि मानिसहरूमा विकास हुन्छ ।
यीनै कारणले शंकास्पद बिरामीहरू अस्पताल पुगे पनि उपचार तथा एसोलेसनमा बस्‍न नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘यदि डाक्टरहरू परीक्षण आवश्यक छ भन्छन् भने परीक्षण गर्नै पर्छ, किनकि सानो लापरबाहीका कारण अरू व्यक्ति पनि संक्रमित हुन् खतरा हुन्छ’ अक्षता भट्ट भन्छिन्, ‘कसैले आफ्ना बारेमा सोच्छ भने उसले अरूका बारेमा पनि सोच्नु पर्छ । यसबाहेक एकपटक टेस्ट गरायो भने डरबाट पनि छुट्कारा पाइन्छ ।’
प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ६, २०७६, ०२:४४:००
प्रदेश २ को कोरोना नियन्त्रण कोषमा सवा करोड सहयोग